Nawa Amathiphu E-imeyili Enyanga Yamaholide Ka-2014 Martech Zone
Nawa Amathiphu Akho We-imeyili Esizini Samaholide sika-2014
NgoLwesithathu, Okthoba 29, 2014 NgoLwesithathu, Okthoba 29, 2014 Douglas Karr
I-imeyili ingeyesibili kuphela ukucinga ukubusa ekuthengisweni ngesikhathi samaholide. Abakhangisi babamba iqhaza, bakhuphula ukwedlula kwe-imeyili ngamaphesenti ayi-13 unyaka nonyaka phakathi konyaka wezi-2012 nowezi-2013. Akungabazeki ukuthi sizobona nokuthi izinombolo ziphakanyiswa futhi kulo nyaka ngakho-ke kuzofanele uzilungiselele. Lokhu infographic kusuka ku-imeyili Izindela inikeza ngamathiphu aqinile kanye nedatha ethile esekelayo yokukusiza ukuthi uqalise manje.
Izinsimbi ze-Sleigh ziyakhala futhi yisikhathi manje sokubamba lesi sikhathi samaholide esimangazayo ngokukhangisa nge-imeyili. Songa i-2014 Q4 ngesitayela ngemali engenayo yokubhonga nemikhankaso ye-imeyili yokudala! Ungakhohlwa, i-imeyili ibingenye yeziteshi zokuxhumana eziphumelele kakhulu zabathengisi ngo-2013.
Sisanda kwabelana okumbalwa amaphutha abucayi kufanele ugweme ohlelweni lwakho lokumaketha nge-imeyili futhi lokhu kuphindwaphindwa kuyaziphinda! Amathiphu afaka phakathi ukuqinisekisa ukuthi unesifanekiso esihle se-imeyili esiphendulayo, hlanganisa imizamo yakho ne ukukhuthazwa kwamaholide omphakathi, lungiselela ezinye izaphulelo ezinhle, futhi usakaze ama-imeyili akho kuyo yonke isizini ukuze uqinisekise amanani aphezulu avulekile kulabo abathengi sekwephuzile!
O, futhi akusheshe kakhulu ukuqala. Ngaphezulu uhhafu wabo bonke abathengisi be-imeyili baqala yabo ama-imeyili wokukhuthaza amaholide ekuqaleni kuka-Septhemba ukubamba uhhafu wemakethe oqala ukuchitha kusenesikhathi. Ungakhohlwa ukwabelana nge izifundo esizithole esikhathini samaholide sangonyaka odlule futhi abanye izitayela ezabiwe kule sizini kakade.
Tags: Isikhathi samaholide esingu-2014i-imeyili infographicamathiphu wokuthengisa we-imeyiliizindela ze-imeyiliuhlelo lwamaholideinfographicumklamo ophendulayo weselula
Douglas Karr Wednesday, October 29, 2014 Wednesday, October 29, 2014
Futhi Manje Ngobumnyama Bokumaketha Okuqukethwe kwe-B2B
Nakhu Esikwenzile Ukuphindaphindeka Kokuhamba Komgwaqo Okuphindwe kathathu